Nezvedu - Changzhou Suxing Century Apparel Co., Ltd.
Sangana nezvinodiwa nevatengi nemitengo yakasarudzika uye masevhisi emhando yepamusoro
Zvave zviripo kubva ipapo 1996,Tarisa pane kugadzirwa kwenguo
kuvimbika, mutengi-centric, musika-yakatarisana, tekinoroji-yakavakirwa, mhando kuvimbiswa.
Su Xing kambani iri muChangzhou guta, Jiangsu Province, China. Icho chiitiko chinosanganisa kugadzirwa nekutengesa. Yakavambwa muna 1992, kambani izvozvi ine Changzhou Suxing nguo Co., LTD Hubei Suxing nguo Co., LTD Changzhou Suxing nguo Co., LTD Kambani ane gumi kugadzirwa mitsetse, vashandi vanopfuura 580 uye wepagore okutengesa $ mamiriyoni 55. Muna 2012, Iyo Kambani yakasimbisa Hubei Suxing Garment Co, LTD
Iyo kambani ndiro hombe dhizaini yekugadzira bhizinesi muLiangzihu nzvimbo, Ezhou Guta, Hubei Province. Iine vashandi mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemakumi matatu nematanhatu emusangano, iine gore rinoburitsa madhora makumi matatu emadhora ekuAmerica Su Xing kambani inonamatira kune yakaoma, kuvimbika kweiyo bhizinesi uzivi, kwemakore mazhinji neakanyanya kunyorwa vadyidzani. Razova vaitungamira zvebhizimisi changzhou uye Hubei omunharaunda nguo bhizimisi. Zvitupa zvakawanda, zvepamusha "ISO9001" chitupa, chiAmerican "Kuteedzera (Global Garment Kugadzira Basa) chitupa, RCS chitupa, RDS chitupa, kure kudzora chombo chiteshi chitupa, HIGG SLCP, nezvimwe. Yepamberi yekutengeserana kwekunze Export Enterprise "," Hunhu kuvimbika kweChina mabhizinesi "," Changzhou Garment Viwanda Association "mutevedzeri wasachigaro wekambani zvichingodaro.
Mubvunzo: Ungatanga sei chirongwa?
A: Kutanga chirongwa chako, ndapota titumire iwo dhizaini dhizaini nerondedzero yezvinhu, huwandu uye kupedzisa. Ipapo, iwe unowana iyo kotesheni kubva kwatiri mukati maawa makumi maviri nemana.
Mubvunzo: Hatina kujairana nekutakura kwenyika dzese, ungabata zvese zvine hungwaru?
A: Zvirokwazvo. Makore mazhinji ruzivo uye kwenguva yakareba zvakabatana kumberi zvichaendesa kutsigira kwedu pairi. Iwe unogona chete kutizivisa zuva rekusvitsa, uye ipapo iwe unozogamuchira izvo zvinhu kuhofisi / kumba. Zvimwe zvinonetsa zvinotisiyira.
Mubvunzo: Zvinotora Nguva Yakareba Sei Sampling?
A: Kazhinji proto sampuro inotora mazuva matatu, nekuti sms sampuro inotora 7-10days.